Gastronomy - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 2)
Beerista bariiska ee Shiinaha waxay soo jirtay laga yaabee 10 sano. Sidee loo koray, intee la cunaa, maxaa lagu sameeyaa. Waan kuu sheegi doonaa.
Suxuunta qalaad ee cunnada Shiinaha
Xiniinyaha, guska guska, carrabka duck, hangarallayaasha, shimbiraha yaryar, kuwani waa uun qaar ka mid ah suxuunta qalaad ee lagu cuno Shiinaha.
Sannad kasta kumanaan dalxiisayaal ah ayaa booqda Australia, iyo waxyaabo kale, oo ay ku ogaadaan cunnada iyo cabitaanka Australiyaanka ah.
Shukulaatooyinka ugu fiican Switzerland
Iswiiska shukulaatada waa arin aad u daran. Maaha wax uun shukulaatada Switzerland ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka.
Caadooyinka iyo hiddaha Hong Kong
Ma rabtaa inaad ogaato caadooyinka iyo caadooyinka Hong Kong? Waxaan sharaxeynaa kuwa ugu caansan nolol maalmeedkooda iyo caloosha.
Capeta waa mid ka mid ah cabitaannada ugu caansan dalka Brazil, oo waxyaabaha ugu waaweyn ay ka kooban yihiin cachaça iyo caano macaan.
Waxyaabaha caadiga ah ee Griiga
Iibsashada alaabada caadiga ah ee Giriiggu waa mid ka mid ah raaxooyinka waaweyn ee ay bixiso safarka dalkan iyo jasiiraddiisa.
Quraacda Kanada waa cuntada ugu muhiimsan ee maalinta, hay'ad run ah nooc kasta oo ay ku kala duwan yihiin.
Cunto loogu diyaariyo Sima, cabitaan ka mid ah dhaqanka Norwey
La Sima waxay u badan tahay inay tahay midka ugu caansan uguna caansan khamriga ee wadamada waqooyiga Yurub sida Norway.
Taariikhda Gastronomy-ka Hindiya
Taariikhda gastronomy-ka Hindiya waxay leedahay asal dhaqan oo wali lagu keydiyo caadooyin badan oo dadka deggan.
Cashada Kirismaska ​​ee Kanada
Cashada Kirismaska ​​ee Kanada, suxuunta dhaqanka cunnada reer Yurub waa la diyaariyey, laguna cusbaynayaa maaddooyinka adduunka cusub.
Shirkadaha sonkorta sameeya ee Kolombiya
Makiinadaha sonkorta sameeyaa waa magaca ay ku caan baxeen gumeystihii hore ee gumeystaha ee lahaa tas-hiilaadka lagu farsameeyo bakooradda sonkorta lagu yaqaan ee laga yaqaan Kolombiya.
Maxay Irishku cunaan Kirismaska
Kirismaska ​​ee Ireland sidoo kale waa waqti soo dhawayn, oo ay ka buuxaan dhaqamo qurux badan, marka qoysaska iyo asxaabtu isugu yimaadaan miiska.
Dhir udgoon, mid ka mid ah sirta cunnada Peruvian-ka
Xawaashku waa mid ka mid ah sirta cunnada Peruvian-ka, taas oo ka mid ah kuwa adduunka looga qadariyo dhadhankeeda iyo udgoonkiisaba.
Taariikhda shukulaatada Switzerland
Muxuu shukulaatada Switzerland caan ku tahay oo lagu qiimeeyaa? Tani waa taariikhdeeda iyo sida ay ku noqotay mid ka mid ah takhasusyada waaweyn ee caloosha.
Quraac Ingiriisi caadi ah: Madoobaadka Madoow
Waxaa lagu sameeyaa dhiig doofaar qalalan iyo buuxin boorash iyo shaciir ah. Badanaa waxaa la siiyaa qabow, in kasta oo ay jiraan kuwa u cuna iyada oo la kariyey, la shiilay ama la dubay.
Miyaad ogtahay caloosha Galicia? Waxaa jira suxuun badan oo hilib ah, kalluun, macmacaan iyo dabcan, khamriga, oo aad kari karto oo ay tahay inaad ku dhadhamiso dhulkeenna Meiga.
Dhaqamadu waxay isu yimaadaan gastronomy si ay u dhaliyaan Bascho pinchos. Maanta waxaan ku siineynaa dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah inaad ku dhacdo jirrabkiisa.
Maxaa loogu magac daray Barrio Húmedo?
Hoos u dhig dalladaha, iska illooba koofiyadaha iyo jaakadaha, tani shaqo kuma laha cimilada. Xaafada…
Duudduub anise, Elche waxyaabaha
Cunto aad u dhaqameed oo ka timid Elche iyo aagga Levante ayaa ah tan Rollos de Anís, taas oo ...
Cuntada Resolí, cabitaanka caadiga ah ee Cuenca
Resolí waa cabitaan aad u caadi ah oo Cuenca ah taasna waxay ku timaaddaa mid waxtar leh oo lagu raaxeysto dhaqanka ugu ...
Dulce Ourense, macmacaanka ugu qanisan uguna dhaqanka badan
Qaar badan oo ka mid ah suxuunta ugu caansan ee Ourense waa cusbada, oo ku saleysan hilibka doofaarka, wan ama octopus; laakiin…
Cabitaannada caadiga ah ee lagu cabbo London
Soo ogow waa maxay cabitaanka caadiga ah ee England, waa maxay cabitaanka caadiga ah ee London? Waxaan halkaan kuugu sheegeynaa waxa uu Ingiriisku cabbayo.
Isku-dubaridka suxuunta ugu fiican ee si buuxda loogu raaxeysto caloosha iyo aagga Amazon. Cuntooyinkooda qalaad way kula yaabi doonaan!
Ma taqaan Quraacda Ingiriisiga? Ukunta la shiilay, hilib doofaar, sausage, yaanyo la shiilay ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay. Ma isku dayday?
Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
Soo ogow qarsoodiga caloosha Caribbean-ka oo ha moogaan iskudhafkan isku dhafan ee cuntooyinka caadiga ah ee ka imanaya gobolka Kariibiyaanka.
Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Andean
Soo ogow qarsoodiga cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Andean iyo caloosha. Waa maxay cuntada caadiga ah ee gobolka Andean iyo tan aagga Kolombiya?
Cunto Afro-Caribbean ah oo laga helo Costa Rica
Soo ogow cuntada caadiga ah ee Costa Rica iyo qaar ka mid ah cuntooyinka Afro-Caribbean-ka caadiga ah sida rondón, gallo pinto ama casado iyo kuwa kale.
Cunnooyinka caadiga ah ee iswiidhishka ah
Ma ogtahay in Iswiidhan kaliya aadan cunin kalluunka salmon iyo kubbadaha hilibka? Waxaan ku tusineynaa dhammaan qarsoodiga caloosha, oo leh suxuunta iswidhishka ee ugu caansan waddanka
Cuntada caadiga ah ee Querétaro
Miyaad booqataa Querétaro oo aad dooneysaa inaad ku raaxeysato cuntada caadiga ah ee Quertataro? Ha u seegin cuntooyinkeeda macaan iyo kuwa caloosha ku jira ee caadiga ah.
Cunnada Marooko, astaamaha iyo suxuunta caanka ah
Laga soo bilaabo dhadhanka dhaqanka iyo dhadhanka qadhaadh ilaa kuwa sonkorta leh iyo reexaanta, waa dhadhanka astaamaha ee qaar ka mid ah ...
Gastronomy in Ávila: ma dhaafi kartid suxuunadan
Haddii aad booqaneyso Ávila ma dhaafi kartid gaashankeeda weyn, gaar ahaan haddii aad jeceshahay hilibka iyo khamriga wanaagsan.
Quraac iswiidhishka caadiga ah
Ma ogtahay in ay jiraan noocyo iswiidhish ah oo quraac ah oo ay kujirto biir tan iyo faahfaahinta kale ee ku saabsan quraacda caadiga ah ee Iswiidhan
Saddex cabitaanno caadi ah oo Irish ah
Kafeega Irish ama Irish Coffe waa mid ka mid ah saddexda cabitaan ee ugu caansan Ireland, laakiin ma ogtahay labada cabitaan ee kale ee Irishku ugu raaxeysto?
Cuntada caadiga ah ee Miami
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa lagu cuno Miami, sii wad akhriska si aad u ogaato dhammaan sirta Roak Steak, Carsaanyada dhagaxa ah iyo waxyaabaha kale ee macmacaanka ah ee lagu cuno Miami
Bandeja paisa, kani waa saxanka ugu caansan dalka Kolombiya
Bandeja Paisa waa cunnada ugu caansan dalka Kolombiya waxaanan ku tusaynaa dhammaan sirteeda: waxyaabaha ay ka kooban tahay, habka wax loo kariyo iyo taariikhda cuntadan macaan.
Cuntada qalaad ee Hong Kong
Hong Kong, waxay caan ku tahay cunnooyinka qalaad, oo ka soo baxa hilibka jiirka ee waddooyinka, iyo sidoo kale miraha iyo khudradda aan laga aqoon dalal badan oo Yurub ah.
Genever, gin Dutch, si aad keligaa u cabto (laakiin shirkad ahaan)
Genever ama Jenever waa gin Dutch caadi ah. Waxay leedahay nidaam wax soo saar aad uga duwan kan London Dry, oo leh aalkolo ka kooban.
Holland, oo ah dalka ugu cabbitaanka kafee badan, ma taas ayaa u badan dad badan?
Nederland ayaa hogaamineysa liiska wadamada ugu isticmaalka qaxwada badan qaarada Yurub. Marka tirakoob ahaan lagu hadlo, nin kasta oo Dutch ah wuxuu caba laba koob iyo badh kafee ah maalintii.
Meesha wax looga cuno London lacag yar
In kasta oo ay caan ku tahay inay tahay magaalo qaali ah, waxaan kuu soo bandhigeynaa meelaha ugu fiican ee London inaad wax ku cunto kuna raaxeyso khibrad raashin oo qaali ah.
Haddii aad u safreyso Kolombiya, waxaad si fiican u taqaanaa dhammaan caadooyinka iyo xiisaha Colombia. Ha moogaanin dhammaan caadooyinka Colombia!
Cabitaannada aan khamriga ahayn ee Giriigga
Haddii aad tagto Griiga oo aadan jeclayn aalkolo laakiin cabitaanno caafimaad leh, ha iloobin inaad isku daydo biyahan Giriigga ee caadiga ah iyo faleebada.
Cuntada dhaqanka ee UK
Socdaal jecel dalxiiska gastronomic, waxaad maqashay in Ingiriisku uusan si sax ah ugu caan bixin cunista cuntada macaan laakiin maahan sidaas
Midhaha ugu fiican ee Peru
Liin dhanaanta waxay leedahay midab lamid ah liinta cagaaran, laakiin way ka badan tahay aashitada, taas oo u oggolaanaysa inay dardar galiso
Cinabku wuxuu ka baxaa xeebta Peru ee koonfurta Lima, waxaana si gaar ah loogu adeegsadaa uureysiga khamriga iyo ...
Goobaha ugufiican hilibka Argentine
Dhadhanka hilibka reer Argentine ayaa caan ka ah adduunka oo dhan mana aha wax iska yimid sababtoo ah halkaas ...
In yar oo ka mid ah gaaska caloosha ee Switzerland
Way adag tahay in la tixraaco nooc ka mid ah cuntooyinka dhaqameed ee Swiss, maaddaama dhaqankeeda cunnada uu ka kooban yahay saddex ...
Maxay yihiin is biirsiyada Austriyaanka ugu caansan?
La kulan oo cabi is biirsaday ugu fiican Austria
Afarta is biirsaday ee ugu fiican Talyaaniga
Ha uga tegin Talyaaniga adigoon isku deyin is biirsaday is biirsaday ee ugu raaxada badan!
Karootada Cake, keega caadiga ah ee Ingiriisiga
Keegga Karootada ayaa dib ugu soo laabtay qarniyadii dhexe. Waqtigaas, macaaneeyeyaashu waxay ahaayeen qaali iyo karootada, dabiici ahaan ...
Waa maxay cabitaanka caadiga ah ee Masar?
Ma hubo sida loo raaco cuntadaada? Dalbo cabitaannada Masaarida ee caadiga ah waxaadna ku raaxeysan kartaa dhadhanka dhaqameed ee Dhulkii Fircoon.
Griiggu waxay cabaan shaaha buurta
Griiga, shaah badan oo buur ah ayaa lagu cunaa, faleebo lagu sameeyo dhir iyo u leeyahay astaamo wanaagsan jirka
Ireland, waa dalka ugu shaaha badan Yurub
Irishku waa yurubiyanka isticmaala shaaha ugu badan, ilaa afar koob maalintii
Griiga iyo rummaanka, midhaha jiilaalka
Rummaanka waa marinka jiilaalka ee Griiga oo aad caan u ah
Tufaaxa anti antiing Swiss
Tufaaxa ka hortagga gabowga ee Iswiiska ayaa ah miraha mar hore laga soo guray geedka inay waqti dheer ku qaataan da'da
Lumpia, cuntada caadiga ah ee Filibiin
Cuntooyinka caadiga ah ee Nederlandka leh kalluunka iyo cuntada badda
Haring waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan uguna caansan ee laga cunteeyo Dutchka isla markaana aad ugu dhow yahay kalluunka iyo kalluunka.
Cunto bariis, macmacaan Argentine dhab ah
Rice pudding waa macmacaan Argentine dhab ah.
Halo-halo, macmacaanka dhaqanka ee Filibiin
Halo-halo waa macmacaan dhaqameed Filibiin ah
Asalka alfajores iyo cunnooyinka fudud
Maanta waxaan ognahay asalka Cordovan alfajores iyo cunto fudud, wax soo saarka gobolka ee caadiga ah ee gobolka Córdoba.
Cordovan alfajores karinta
Cunto dhaqameedka 'Cordovan alfajores' waa mid aad u fudud sidaa darteed waxaad dhadhamin kartaa dhadhanka dhabta ah ee badeecadan gobolka caanka ah.
Khamriga Dutch, waxay ka mid yihiin kuwa ugu fiican adduunka
Holland waa wadan leh dhaqan soo jireen ah oo ku saabsan biirka, waa cabitaankiisa qaran, waxayna ku yiraahdaan Nederland waxaad ka heli kartaa kan ugu fiican adduunka.
Cunnooyinka caadiga ah ee Miami
Waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay yihiin qaar ka mid ah cuntooyinka caadiga ah ee gastronomy-ka Miami iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Noocyo kala duwan oo ka mid ah alaabada la dubay ee Faransiiska
Rootiga Faransiiska waa astaan ​​astaan ​​u ah gastronomy qaran, labadaba tayo ahaan iyo ...
Macmacaanka iyo macmacaanada ugu caansan dalka Brazil
Macmacaanada ugu caansan dalka Brazil guud ahaan waxaa kamid ah miraha kuleylaha sida cambe, cashew, khudradda xiisaha leh, mooska, ...
Cunto macaan oo Swiss ah
Baastada Swiss waxay caan ku tahay adduunka oo idil macaankeeda macaan iyo macaan macaan. Ka mid ah ...
Cunto macaan oo Ingiriis ah iyo macmacaan
Waqtiga Shaaha ee England waa caado soo jiidata dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha labadaba.
Shaah Sakura, cabitaan dhaqameed leh dhadhan jilicsan
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo sameeyo sakura ama shaah sakura yu shaah iyo waxa u dhadhamiya, cabitaan dhaqameed Jabbaan ah oo loogu talagalay munaasabadaha gaarka ah.
Kheer, macmacaanka ugu caansan Hindiya
Kheer, oo sidoo kale loo yaqaan Payasam ama Payesh, waa macaan Hindi caadi ah oo lagu diyaariyo bariis ...
Vienna, magaalada ugu fiican quraacda
Liistada makhaayadaha ku yaal Vienna halkaas oo aad ku heli karto wax kasta oo quraac ah
Noocyada qaar ka mid ah farmaajada Nederlandka ah
Waxsoosaarka farmaajo ayaa laga yaabaa inuu yahay sheyga kaliya ee awooda inuu la tartamo noocyada tulips-ka kala duwan. Halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa burush ka mid ah kuwa aad ka heli doonto.
Fatay, carabtii carbeed ee caanka ahayd
Dufanka faatigu aad buu caan uga yahay adduunka oo dhan. Waxay ka samaysan yihiin hilib shiidan, liin, yaanyo, ...
Macmacaanada caadiga ah ee lagu raaxeysto dalka Masar
Ayaa sheegay in Masar aysan ka jirin macmacaan wanaagsan iyo suxuun macaan? Marka xigta waxaan ogaan doonaa qaar ka mid ah macmacaanka ugu badan ...
Mac macaan macaan
Cunnada Switzerland waa iid loogu talagalay raashinka ugu baahida badan. Waxay si habsami leh isugu darsameysaa saamaynta Jarmalka, cunnada Faransiiska ...
Vanillekipferl, buskudka macaan ee caadiga ah ee Austrian
Vanillekipferl waa buskudka macaan ee caadiga ah ee lagu cuno Kirismaska ​​Austria
Yuca leh mojo, cunnada Cuba
Yucca leh mojo waa saxanka caadiga ah ee gastronomy-ka Cuba
Macmacaan Ruush ah oo ka farxiya ilig macaan
Gastronomy-ka Ruushka ayaa caan ku ah suxuunta suxuunta leh, kuwaas oo fuud iyo maraq si gaar ah u taagan ...
Ku raaxayso alaabada caadiga ah ee Venezuela xilliga fasaxa
Venezuela waxay bixisaa alaabooyin kala duwan si ay ugu raaxaystaan ​​caloosha wanaagsan.
Goobaha ugu fiican jalaatada ee Milan
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa kuwa ugu fiican goobaha jalaatada ee Milano ku yaal, kuwa noolaa
Dhir iyo dhir udgoon oo aan ka heli karno Filibiin
Cunnooyinka Filibiin waxay u isticmaalaan dhir udgoon iyo geedo badan oo kala duwan si ay u sharaxayaan, qaarkoodna runti aad u macaan yihiin.
La michetta, rootiga Milan
Michetta waa rootiga ugu caansan ee Milan, inkasta oo sanadihii la soo dhaafay aan sidii hore loo samayn
Cunto dhaqameedka Québec
Cuntada gobolka Quebec waxaa si xoogan u saameeyay cunnooyinka Faransiiska iyo Ireland, tan iyo markii ...
Makhaayadaha ugu qaalisan London
Muuqaalka cuntada London aad ayuu u koray tobankii sano ee la soo dhaafay iyadoo Michelin stars la siiyay in ka badan 60 ...
Umbria, waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee khamriga la tago 2014
Khamriyada Umbrian waxay ku qoran yihiin kuwa adduunka ugu fiican.
Dukaamada keega, kafateeriyada iyo rootiyada rootiga ee Griiga
Toddobaadka dhexdiisa waxaan dib u eegnay qaar ka mid ah makhaayadaha ugu wanaagsan iyo qashin-qubka Athens. Intaas oo dhan ka dib waa ...
Salzbuger Nockerl, buuraha macaan ee Salzburg
Salzburger Nockerl, macmacaanka Austria
Melomakarona, super macaan
Melomakarona, Giriigga macaan ee macaan ee caadiga ah
Cunto kariyeyaasha caanka ah ee Hindiya
Maanta waxaan la kulmi doonnaa kuugga ugu caansan Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista Vikas Khanna, cunto kariye ku dhashay ...
Cunto-yaqaanno Caan ah oo reer Australia ah
Munaasabaddan waxaan kula kulmi doonnaa kuugga ugu caansan Australia. Aynu ku bilowno tixraaca Marion Grasby, oo dhashay 1982 kuna ...
Cashada Kirismaska ​​ee Brazil
Cashada Kirismaska ​​ee reer Baraasiil waxay ku jirtaa dhadhamin dheeri ah oo heer gobol ah iyo maaddooyin ka dhigaya munaasabadda mid macaan oo gaar ah unique
Maxaad cuntaa xilliga Kirismaska ​​ee Holland?
Qoysas badan oo reer Nederland ah waxay si dhab ah u qaataan diyaarinta cashadooda kirismaska. Cunnooyinkaan waxaa ka mid noqon kara hilibka ...
Cuntooyinka Maxaliga ah ee Tasmania
Haddii aad ka gudubto Tasmania ma joojin kartid dhadhaminta qaar ka mid ah alaabooyinka maxalliga ah. Aynu ku bilowno sheegista wasabi, maado aasaasi ah ...
Sausages waa laanta jikada ee loogu talagalay alaabada hilibka la warshadeeyay, sida hilibka doofaarka, ham, ...
Cotoletta recipe a la milanesa
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa cuntada sida loo kariyo ee loo yaqaan 'Milanese cotoletta', oo ah mid ka mid ah suxuunta ugu caansan ee cunnada Milan.
Guasacaca, maraqa Venezuela
Dadka reer Venezuela waxay leeyihiin nooc guacamole u gaar ah oo loo yaqaan guasacaca. Waxay u badan tahay dhadhanka avocado, waana la dhammeeyay ...
Cunnooyinka maraq ee Ruushka
Waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka aad ka fekereyso maraqa jiilaalka waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Ruushka ...
Biirka caanka ah ee Ruushka
Iyada oo ay sii kordhayaan iibinta biirka, macmacaannada Ruushka ayaa soo saara aalkolo ka badan sidii hore. Dhab ahaan, ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ...
Cabitaannada caadiga ah ee Peru
Cudurka 'gastronomy' ee loo yaqaan 'gastronomy of Peru' waa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu kala duwan ee ay ku jiraan cabbitaannada macaan iyo kuwa gaarka ah ee ...
Magaalooyinka gastronomic ee Shiinaha
Cunnooyinka Shiinaha, oo ah kuwo qalaad, dhadhan fiican oo kaladuwan, waxay soo jiitaan dareenka dadka ka cunteeya adduunka oo dhan maxaa ...
Prego, rooti reer Burtuqiis ah
Makhaayadaha Bortuqiiska waxaa caadi ka ah in loogu adeego "prego" caan ah, ismaris lagu sameeyo Boortaqiiska. Kaliya maaha rooti kasta ...
Waxaan maanta kuu soo qaadaneynaa cunto karinta loo yaqaan 'panzerottis', oo ah cunno cunno aad u badan guud ahaan Talyaaniga, gaar ahaan koonfurta dalka iyo Milano
Asalka Salad Ruushka
Salatka Ruushka, oo sidoo kale loo yaqaan Salade russe ama Salat Olivier, ma uusan sameynin qof Ruush ah, laakiin ...
Makhaayadaha isboorti ee ugu wanaagsan Lima
Bartamaha magaalada Lima, horteeda Plaza San Martín, waxaa ku yaal maqaayad caan ah, oo ...
Cudurka caloosha ee Mareykanka
Cuntadu waa wadnaha dhaqammada oo dhan, Mareykankuna kama reeban yahay. Sida waddan ...
Makhaayadaha ugu fiican Plaka
Aagga lugta weyn ee degmada Plaka, oo leh jidadkeeda cidhiidhiga ah iyo luuqyada jaranjarooyinka ah ee u kaca dhinaca ...
Digaagga Kung Pao (Diyaarinta)
Maraq Beedka Shiinaha
Waa sidee quraacda Griiga
Taariikhda gastronomy-ka Shiinaha: Dim Sum
Mid ka mid ah suxuunta dhaqanka ee Shiinaha, haddii uusan ahayn kuwa ugu caansan, waa Dim Sum, oo ka kooban noocyo kala duwan ...
Mate, cabitaanka caadiga ah ee Argentina
In kasta oo jaleecada hore ay umuuqato shaah, laakiin isku dhafku waa mid kamid ah faleebada dhaqanka ee Argentina ...
Cunnooyinka Burtuqiiska: Sapateira Recheada
Noocyada kaladuwan ee cunnooyinka Bortuqiisku waxay ku saleysan yihiin dhadhanka badda Mediterranean halkaas oo hal-abuurnimadu ay kalluun tahay ...
Char Siu Bao (Hilib doofaar shiidan oo shiidan ah)
Cajiin Bun Cajiib ah (rooti)
Cunto kariyeyaasha Swiss ee ugu Fiican
Cuntada Switzerland waxay kasbatay sumcad adduunka oo dhan. Mana aha fursad in ku dhowaad dhammaan ...
Jiaozi (Shiino ravioli)
Cabitaannada Hindida ee caanka ah
Markan waxaan ka hadlaynaa cabitaanno caan ah oo laga keenay Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista Nimbu Pani, oo ah cabitaan ...
Cunnada Ingiriisiga, mid dhaqameed oo kaladuwan
Cunnada Ingiriisiga, oo asal ahaan ka timid Ingiriiska, waxaa go'aamiya cimilada fudud, juqraafiga iyo taariikhda waddanka. Ka sokow…
Gobollada khamriga ee Ruushka
Khamri ayaa laga soo saaray Ruushka tan iyo kooxdii Griiggii hore, sidii ay ula jirtay ...
Warshadaha shukulaatada ee magaalada Zurich
Shukulaatada Switzerland waa mid ka mid ah astaamaha ugu matala ee dalkan, oo ay weheliyaan bangiyada iyo saacadaha. Waa…
Cabitaannada caanka ah ee Shiinaha; khamriga jaalaha ah
Sharaabyada ugu caansan Shiinaha waxaa ka mid ah cabitaanka khamriga oo ku badan noocyada iyo qiimaha.
Farsala halva, cunto karis macaan oo casri ah
Farsala halva, Griiko Griiga
Makhaayadaha ugu Fiican Qaahira
Qaahira waa magaalo mashquul badan, qas badan oo soo jiidashadeeda iyo khiyaanadeeda lagu gartaa khalkhalkeeda. Sikastaba,…
Cabitaannada caadiga ah ee Ruushka
Ruushka waxaa lagu tiriyaa inuu kamid yahay seddexda dal ee ugu shaaha badan shaaha, oo ay weheliyaan Great Britain iyo Japan. Daar…
Shukulaatooyin iyo boorsooyin, xusuusiyayaal ka yimid Austria
xusuus ka timid Austria
Suxuunta caadiga ah ee cunnada Venezuela
Cudurka caloosha ee Venezuela wuxuu leeyahay saameyn badan oo reer Yurub ah (gaar ahaan Talyaani, Isbaanish iyo Faransiis) waana arrin ...
Cunnada Trinidad iyo Tobago
Markaad u maleyneyso inaad fasax ku leedahay Kariibiyaanka, fasaxyada, kama bixi kartid Trinidad ...
Cuntada Ruushka, faro badan oo caafimaad leh
Kuma qorna liiska cunnada wanaagsan ee adduunka, si kastaba ha noqotee, waxa ka maqan cuntada Ruushka ...
Cunto dhaqameedka Ruushka
Cunnooyinka dhaqameed ee Ruushka waxay u muuqdaan inay soo bandhigaan xaddi badan oo kaarbohaydraytyo iyo dufan, kuwaas oo bixiya kuleyl iyo ...
Taariikhda farmaajo ee gastronomy-ka Shiinaha
Malossol caviar oo ka yimid Ruushka
Malossol caviar madow waa ukunta kalluunka sturgeon oo la farsameeyay ilaa waqtigii ...
Quraacda qaabka Mareykanka ee Lima
Dhibaatada ka jirta helitaanka quraac u eg qaab Mareykan ah oo ku taal Lima ayaa inta badan ka yaabisa safarrada iyo dalxiisayaasha ...
Cuntada caadiga ah ee Venezuela
Cunnooyinka Venezuela waa kuwo aad u ballaaran oo ka buuxa Yurub, Kariibiyaanka iyo saamaynta gobolka. Waxaa ka mid ah cunnooyinka caadiga ah ee caadiga ...
Cunnada iswiidhishka xilliga ciida
Habeenimmada Kirismaska ​​ee Iswiidhan waa marka cuntada ugu badan ay ku badan yihiin miisaska. Tani badanaa waa "julbord", ...
Liiska caadiga ah ee Ruushka
Cuntada Ruushka badanaa waa wax soo saar cimilada Ruushka iyo deegaanka. Iyadoo xilliyo kooban oo ...
Cuntada loogu talagalay Tibetan Momos
Hooyooyinka reer Tibetan
Baararka ugufiican Qaahira
Qaahira waa magaalo ay tahay in loo adeego safarka Masar. Magaalo isu keenta duug ...
Qaxwaha Iswiidhishka, dhaqan gastronomic
Iswiidhan, oo ay ku nool yihiin qiyaastii 8,9 milyan, ayaa Finland ka dambeysa, mid ka mid ah waddamada ugu caansan adduunka ee kafeega coffee.
Dhaqanka cunto karinta Iswiidhishka wuxuu bixiyaa cunno cunno ah oo loo yaqaan 'sandwiches' kaas oo loogu adeego cuno cuno ahaan taariikhaha qaarkood ee sanadka, sida…
Lausanne, caasimada gastronomic ee Switzerland
Haddii cuntada Faransiisku caan ku tahay oo caan ka tahay adduunka oo dhan, malaha Switzerland ayaa sidoo kale ah. Sida ugu fiican ...
Gastronomy ee gobolka koonfureed
Waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah astaamaha lagu garto caloosha caloosha ee gobolka koonfureed ee bannaanka Hungary. Isla waa ...
Taariikhda vodka Ruushka
Vodka waa cabitaan bini aadamka ku weheliya murugo, farxad iyo nasasho fudud….
Sarma (Khudaarta roodhida ee reer Croatia)
Asalka cunnadan reer Croatia waa Turki. Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo "sarma" waxayna ku kala duwan yihiin gobol ahaan. Waxyaabaha ay ka kooban:…
Seffa, oo ah kan ugu macaan carruurta yaryar
Qodobka aan ku ognahay seffa, macaanida ugu yar yar.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Gastronomy-ka Australia
Xagga gastronomy-ka Australia, waxaa mudan in la qiimeeyo in bilowgeedii ay ku raaxeysatey xiriir weyn Ingiriiska, ...
Quandong: Midhaha duurjoogta ee Australia
Mid ka mid ah dhinacyada ka muuqda ixtiraamka dhulka Australiya ayaa ah in laga doorbiday koritaanka ...
Cunnooyinka maraq Boortaqiiska
Cunnooyinka Boortaqiiska ayaa caan ka ah adduunka oo dhan, labadaba qiimaha caloosha, laakiin sidoo kale qiimaha sarreeya ...
Octopus la dubay, takhasus Giriig ah
Qolofleyda la dubay, Cunnooyinka cunnada Griiga
Cunnada Dutchka: Stamppot
Cunnooyinka Dutch-ka ayaa dhaqan ahaan helay kufsi xun, laakiin maanta, farshaxanka cunnada wanaagsan waa nool yahay sida ...
Ka cunteynta Kanada
Cunitaanka Kanada waxay u noqon kartaa khibrad dhab ah xusuusta dalxiisayaasha. Taasina waa cuntada macaan ee Kanadiyaanka leh ...
Sayán, dhulka alfajores
Waxay ku taal 197 km waqooyiga magaalada Lima, magaaladan nabdoon ee gobolka Huaura ee…
Maxaad cuntaa waqtiga shaaha ee England?
Mid ka mid ah dhaqamada ugu muhiimsan England waa Shaaha Waqtiga. Waa saacad caadiyan noqota ...
Ogeysiinta Hill Carnival, oo ah qayb yar oo Kareebiyaanka ah oo ku taal London
Oo la qabtay Ogosto ilaa 1966, Notting Hill Carnival waa dabaaldegga ugu weyn ee ...
Ku raaxayso Cunnada Khudradda Jarmalka
Waxaa jira tiro badan oo safar ah oo taga Jarmalka si ay ugu nastaan ​​xoogaa xasilloon ...
Ghoriba oo leh yicib, buskudka Marooko
Qodobka aan ku garaneyno ghoriba leh yicib, buskudka Morocco.
Diyaargarow fudud ee Spaetzle ah si loogu sameeyo guriga
Markaad booqato Jarmalka si hubaal ah in mar uun aad ku raaxeysan doonto qaar ka mid ah cuntooyinkeeda ugu macaan ee makhaayadaha ama ...
Dukaamada cajiin ee ugu fiican Lisbon
Cunnooyinka Bortuqiisku ma ahan oo keliya kalluunka. Kuwa jecel macmacaanka waa inay ogaadaan in Lisbon leedahay barxado caan ah ...
Cunnooyinka Ingiriiska iyo suxuunta caadiga ah
Hilibku wuxuu ka kooban yahay qayb weyn oo ka mid ah cuntooyinka Ingiriisiga dhaqameed. Halka dhaantada qaranku ay hadda la jaanqaadayso ...
Cunto dhaqameedka Waqooyiga England
Waqooyiga England waxaa ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin Yorkshire, Bradford, Barnsley, Newcastle iyo Doncaster. Cimilada deegaanka ...
Noocyada bolseyska Boortaqiiska
Boortaqiiska wuxuu leeyahay sausages aad u kala duwan, oo ka tarjumaya saameynta, dhaqanka iyo taariikhda ...
Maacuunta jikada Ruushka
Ereyga "golubtsy" ama kaabash cufan ayaa badanaa soo celiya xusuustii cunnadii guriga lagu kariyey ee Ruushka. Laga soo bilaabo fudud ...
Saamaynta cuntada Cuba
Intuusan Isbaanishku soo gaadhin Cuba, Hindida reer Cuba waxay kalluumaysanayeen ugaarsanayeen cuntadooda. Waxay ka cuneen ...
Noocyada cuntada Cuba
Cuntada Cuba waa noocyo isugu jira Latin, Amerindian iyo cunnada Afrikaanka ah oo isku daraya isticmaalka hilibka, digirta ...
Quraacda Ruushka: Zavtrak
Dadka Ruushka, sida dhaqamo kale oo badan, guud ahaan waxay ku raaxaystaan ​​seddex jeer maalintii: zavtrak ama…
Cuntada Swiss-ka waxaa ku badan inta badan waddamada deriska la ah, hase yeeshee Switzerland waxay shidaal ku siisaa jikooyinka afar qaybood ...
Khamrigii caanka ahaa ee Burtuqaal
Boortaqiiska ma noqon karo wadanka ugu horeeya ee aad ka fikirto markaad raadineyso khamri cusub. Si kastaba ha noqotee,…
Cunto si aad u sameyso hake la dubay oo macaan
Waxyaabaha ay ka kooban tahay 1 Unug weyn Hake 3 cutubyo Dhexdhexaad baradhada 1 Cutub Dhexdhexaad Basasha jarjar siddo 1 Yaanyo Dhexe Dhexdhexaad ...
Quraac wanaagsan oo Ruush ah
Si loo helo quraac run ah oo Ruush ah, waxaa lagama maarmaan ah in goor hore la kaco. Caadi ahaan Ruushka waxay si aad ah u quudiyaan ...
Isku darka dhaqammada carabiga iyo faransiiska ayaa raad ku reebaya cunnooyinka Marooko. Sida quraacda, ee ...
Immisa ayey ku kacaysaa in wax laga cuno Zurich?
Sida laga soo xigtay majaladda The Economist, Zurich wuxuu kaalinta koowaad ka galay liiska sanadlaha ee majaladda oo ka mid ah ...
Cunnooyinka Argentine: Carbonada
Cunto karis hilib la dubay oo leh khamri cas iyo khudrad
Waxyaabaha ay ka kooban tahay 2 Kgs oo ah Hilibka lo'da 2 Koob Khamri Cas Cas 1 Unug Aubergine 1 Gambaleel Qeyb 2 Baradho ...
Cunto si aad u sameyso disk leh cuntada badda iyo hilibka
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: 1 Kg. Choritos 1 Kg. Machas 1 Kg. Cholgas 200 Grs. Gawaarida (ikhtiyaar) 1 Cutub Basasha weyn ee baalka ...
Cunnooyinka kareemka aubergine ee reer Masar
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: 1 eggplant weyn. 1 xabo oo toon weyn. 1 ama 2 qaado oo liin dhanaan ah. 2 yogurts ...
Grappamiel cabitaanka caadiga ah ee laga helo Uruguay
Hadaad rabto inaad sameyso cabitaankan xusuusnow ka hor intaadan isku darka malabka iyo cunada in aad malabka wax yar ku kululeyn karto bain-marie si ay u ahaato mid dareera badan sidaana si dhaqso leh ayaad iskugu qasin kartaa iyo in labada maaddaba ay yihiin si fiican isugu dhafan midba midka kale, Shaki la'aan, grappa waa mid ka mid ah cabitaannada ugu isticmaalka badan Uruguay, sida biirka ama malta.
Asalka Suugada Carusso
Suugada carusso waxay leedahay magac aad u qaas ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka talyaaniga, si kastaba ha ahaatee maraqaani wuxuu ka soo bilaabmay Uruguay iyo sanado badan ka hor, maraqaani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ugxanta reer Uruguay waana midka lasocda dhamaan baastada laga bilaabo baastada caadiga ah ilaa baastada la buuxiyey. sida cannelloni ama sidoo kale jirdil ama ravioli, laakiin asalka maraqaani wuxuu ka yimid maqaaxi waxayna la xiriirtaa heesaa caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Talyaaniga.
Gastronomy of Uruguay: Creole Salad
Goor dambe waa inaan ku dhahnaa salad la cabay liin dhanaan, qaado qaado oo khal khalka tufaaxa ah iyo saliid, waxaan ku cusbooneysiin karnaa saliid saytuun ah ama saliid gabbaldayaha, qaabkan waxaan ku leenahay salad aad u hodan ah oo ku habboon oo aan ku raaci karno barbecue ama dubay.
Gastronomy of Uruguay: Cuntooyinka Creole
Gastronomy-ka Uruguay wuxuu ku saleysan yahay midka caadiga ah ee loo yaqaan 'Creole gastronomy', kaas oo la badalay sanadihii la soo dhaafay sidoo kale wuxuu caan ku yahay wadamada kale sida Argentina, Peru, Bolivia ama Chile, qaar ka mid ah wax soo saarka caadiga ah ee gastronomy ee Uruguay sida Creole empanadas ama keeg la shiilay ayaa aad ugu badan wadamada sida Paraguay ama Argentina, si kastaba ha noqotee qaabka caadiga ah ayaa badanaa ku kala duwan dal ilaa wadan.
Cun hilibka kangaroo
Cunista hilibka kangarooka ee Australia
Maxaa laga ogaanayaa farmaajo Australia
Chees in Australia
Meesha laga cuno Kanada
Cuntada Kanadiyaanka waxay ku saleysan tahay beeraha hodanka ah oo fura fursado aan dhammaad lahayn oo caloosha ah. Tan ilaa…
Rooti Giriiggii hore
Badarka ayaa aasaas u ahaa cuntada Giriiggii hore, miraha ugu muhiimsan ee la adeegsaday waxay ahaayeen qamadi iyo ...
Baastoorka Jabbaan: Ningyo-yaki
Ningyo-yaki waa macaan Japanese ah oo laga sameeyay keeg leh anko kasutera buuxin, kaas oo ah nooc keeg leh ...
Suxuunta Giriigga ee leh kalluunka iyo cuntada badda
Cunnooyinka Griiga ee laga sameeyo kalluunka iyo cuntada badda
Taariikhda bariiska ee Shiinaha
Khubarada cilmiga dhulka ayaa xaqiijiyey in Shiinaha uu bilaabay inuu beero bariis ugu yaraan 3.000 ilaa 4.000 sano ka hor. Daar…
Macmacaanka macaan ee Albacete
Shaki la'aan kan ugu fiican gobolka oo dhan ... Ha isku dayin inaad ka tagto miiska ka dib markaad mid walba cuntay ...
Markii la faafiyey qaboojiyeyaasha sannadihii 60-meeyadii, jalaatada waxay ku sii badatay bulshooyin badan oo adduunka ah, ...
Macmacaanada reer Argentine: Torta Rogel
Keegga rogel waa macmacaanka caadiga ah ee Argentina, soo jeedin leh maaddada ugu muhiimsan ee macaan ee ...
Xagee laga cunaa quraac wanaagsan oo Irish ah Dublin
Waxaad timid Ireland, malaha Dublin, oo si toos ah ayaad u seexatay. Maalinta xigta waxaad aadeysaa quraac ...
Khamriga Irish, naadir
Ireland ma sameysaa khamri? Ma jiraan khamri Irish ah? Ireland waxay samaysaa biir iyo wiswis wanaagsan laakiin… miyuu sameeyaa khamri? Su'aal wanaagsan. Ilaa…
Gastronomy-ka Ruushka: cunto kariyeyaasha
Ruushka ugu horrayn waa dal woqooyi leh xilli qabow oo qabow. Marka cunnadu waa inay siisaa xoog badan iyo kuleyl ...
Koji, waa 2,000-sano jir boqoshaada Japan
Horumarinta cunnooyinka Jabbaan ayaa wax badan ku leh dejista Koji, oo ah nooc ka mid ah boqoshaada la isticmaalo ...
Maraqayaasha Dhaqanka ee Dutch: Groninger Mosterdsoep
Dutchku waxay caan ku yihiin maraqa dhadhaminta weyn. Xaqiiqdii, waxaa jira mid aad caan u ah gobolka Groningen oo ah ...
Gastoriyada Portuguese: Malasadas
Malasada waa nooc ka mid ah doomaha ka soo baxa cunnada Burtuqiiska, taas oo la sheego inay tahay markii ugu horreysay ee ay ...
Cunnada reer Jamaica waa caafimaad maxaa yeelay waxaa lagu sameeyaa cuntooyin badan oo aan la soo saarin, waxay isticmaalaan qaybo yar oo hilib ah, ...
Cajiinka hilibka ee England
Hilibka hilibku waa cunno iyo cunno dhaqameed Ingiriis iyo Irish oo hilib iyo khudrad lagu daray saafi ah ...
Suuqa beerta ee Griiga waxaa ku badan noocyo shisheeye laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan jirin noocyo ...
Salad Kanadiyaan ah
Cunnooyinka reer Kanadiyaanka ay jecel yihiin waxoogaa wey ku kala duwan yihiin gobol ilaa gobol, waxaana aad u saameeya hiddahooda ...
Gastronomy ee Scotland
Iyagoo qayb ka ah Great Britain, Scottish England iyo Wales, waxay leeyihiin gastronomy kaladuwan oo caan ka ah adduunka oo dhan….
Cunnooyinka Cunnada Iskotishka: Cunto La dubay
Kani waa qaab dhaqameed loogu talagalay grouse duban, oo ah nooc ka mid ah shimbiraha xameetida ee ku nool ...
Okayu, buskudka bariiska Jabbaan
Ma jeceshahay caano bariis ah? Waxaa lagu magacaabaa Okayu ama kayu gudaha Japan waxaana loo yaqaanaa saxan ka ...
Taariikhda cunnada Cuba
Cunnooyinka Kuubaanka waa natiijada iskudhafka Isbaanishka, dhaladka, Afrikaanka iyo Kariibiyaanka….
Cunnooyinka cuntada ee Kanada
Cunnada reer Kanada waxay u qaybsan tahay laba khadad oo waaweyn oo saameyn ah: Ingiriis iyo Faransiis. Si kastaba ha noqotee, dadweynaha ...
Macmacaanka Ruushka: Paskha
Paskha waa macaan u eg Ahraamta oo lagu diyaariyo xilliga Easter-ka guryaha Ruushka ee Orthodox, ...
Suxuunta dhaqameed ee Québec: Poutine
Poutine waa cunno caan ah oo ka timaadda gobolka Canadian ee ku hadla luuqadda Faransiiska ee Quebec. Magaca macnihiisu waa "khalkhal" faransiiska, ...
Shashlyk, ruushka ruushka
Shashlyk waa cunnada lagama maarmaanka u ah waddammada waddamadii USSR-dii hore laga diyaariyey wan, ...
Gastón Acurio iyo makhaayadihiisa ku yaal Lima
Shaki kuma jiro in kuugga ugu caansan uguna wakiilka ah cunnada Peruvian-ka uu yahay Gastón Acurio, oo ...
Cunnooyinka cuntada ee Shiinaha ee Sannadaha Cusub
Mid ka mid ah waxyaabaha Shiinaha loogu jecel yahay cashada sannadka cusub ee Shiinaha waa Hilibka lo'da oo leh Broccoli. The…
Yorkshire Pudding, cuntada caadiga ah ee Ingiriisiga
Tani waa saxan astaan ​​u ah caloosha caloosha England: Yorkshire Pudding oo ah saxan ...
Macmacaanka iyo macmacaanka Kanada
Macmacaanadan hodanka ah waxaa loogu magac daray magaalo ku taal Jasiiradda Vancouver ee British Columbia: Nanaimo Bars….
Macmacaanada Giriigga ee caadiga ah
Muxuu Griiggu cunay Kirismaskan? Maxay ka soo iibsadeen suuqa 'Hersonissos bazaar' ama dukaamada? Maxaa ku jiray ...
Sannadka cusub ee Holland, hiddaha iyo dhaqanka
1-da Janaayo waa maalinta koowaad ee sanadka, marka loo eego kalandarka Miilaadiyada sidaa darteed dhaqamada ...
Cudurka caloosha ee waqooyiga Brazil
Brazil ma ahan wadan yar. Hase yeeshe, waa mid ka mid ah waddamada ugu waaweyn ...
La Mamajuana: Dominican cabitaan ruuxi ah
Haddii ay tahay inaan sheegno cabitaan caadi ah oo ka yimaada Dominican Republic, waa in la sheegaa shaki la'aan ...
Gastronomy-ka Kirismaska ​​ee Boortaqiiska
Cashada Kirismaska ​​ee bisha Diseembar 24, waa wax caadi ka ah Bortuqiiska in loo adeego Bolo Rei, oo ah keeg ...
Kalluunka iyo cuntada badda ee dekedda Athens
Haddii aad jeceshahay kalluunka, waxaa ugu wanaagsan in laga dalbado makhaayadaha ama guryaha lagu iibiyo ee Piraeus. Aagga dekedda ...
Noocyada kafeega Boortaqiiska
Faahfaahin ku saabsan kuwa kafee jecel. Boortaqiiska ereyga espresso looma isticmaalo waxayna kuxirantahay magaalada, waa ...
Waxyaabaha caadiga ah ee ka yimaada La Mancha ee Valdepeñas
Valdepeñas waxaan ka heli karnaa bakhaar caadi ah oo ka mid ah alaabooyinka La Mancha qiimo aad u wanaagsan, waxaa loo yaqaan San Borce
Cunnooyinka Venezuela: Digirta Stewed Bay
Digirtu waa mid ka mid ah wax soo saarka caadiga ah ee Venezuela maxaa yeelay waa la koray oo sidoo kale la soo saaray si loo dhoofiyo, maaddooyinkan waxaa loo isticmaali jiray qarniyo in gastronomy ee Venezuela ma aha oo kaliya in lagu diyaariyo cuntada sida qadada ama qadada laakiin sidoo kale in digirta lagu daro Quraacda, tan Waqtiga waxaan ku siin doonnaa cunto karinta caadiga ah ee reer Venezuela, waa digirta beerka, oo loo kariyo sidii haddii la kariyey.
Sidee quraac ugu jirtaa Venezuela
Quraacda Venezuela waa mid ka mid ah daqiiqadaha ugu muhiimsan ee lala kulmo qoyska lana dhadhamiyo cunno macaan, cuntooyinka iyo cuntooyinku aad ayey ugu kala duwan yihiin quraacda dhaqameed ee Mareykanka tusaale ahaan, maaddaama Venezuela ay ku dareyso suxuun dhaqameedyo kale oo ku saleysan alaabta ceyriinka ah sida digirta quraacda ku jirta. , quraacda caadiga ah ee Venezuela waxay noqon kartaa kafeega, maadaama hadhuudhkani aad ugu badan yahay Venezuela.
Diyaarinta saladhka Scandinavian-ka
"Inta udhaxeysa dhadhanka ma necbaado". Waxay u badan tahay laga bilaabo da'da aad u yar waxaan necbahay khudaarta sida basasha, xididdo, toon, ama ...
Dominican Gastronomy I
Sancocho-ka macaan, uumiga uumi-socodka iyo naas-nuujinta nafaqada leh, iyo cuntooyinka kale ee caadiga ah iyo cabbitaannada ...
Tortillas Indian, saxanka caadiga ah ee Hindiya
Shaki kuma jiro in Hindiya ay tahay waddan ay ka buuxdo fursado ficil kasta, sababtan awgeed ayaan uga hadlaynaa
Suxuunta kaladuwan ee lagu dhadhaminayo Cologne
Gurría waxaan aqoonsanay kala saarida waxyaabaha qaar ee ugu muhiimsan magaalada Colonia oo ka kooban midkasta ...
10-ka ugu caansan reer Peru ee adduunka
Guusha heesaha reer Peru ee Gianmarco ee abaalmarinta Latin Grammy waxay ahayd mid aad u wanaagsan, laakiin ma ahan qofkii ugu horreeyay ee reer Peru ah ee guuleysta ...
Hong Kong iyo caloosha
Cunto kaladuwan oo qalaad oo ku taal Hong Kong ayaa horteenna laga helay, way kala duwan tahay maxaa yeelay dhexdeeda ayaan ka helnaa kuwa ugu badan ...
Noocyo kala duwan oo macmacaan norweji ah
Cunitaanku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu raaxada badan nolosha, ka dib koorsada wanaagsan ee wanaagsan, maxaa ka wanaagsan ...
Lamington, keeggii Australia ee caadiga ahaa
Mid kale oo ka mid ah suxuunta caadiga ah ee Australia waa keega Lamington. Waxaan mar hore kahadleynaa suxuunta macaan maxaa yeelay waa ...
Irishku waxay jecel yihiin baradhada
Ireland waligeed waxay ahayd wadan miyi ah inkasta oo maanta kaliya 20% dhulkeedu u go'an yahay beeraha….
Maraga dabada Kangaroo, takhasuska Australia
Haddii aad jeceshahay inaad dhadhamiso caloosha caloosha ee waddan kasta oo aad booqato, waan kugu hambalyeynayaa. Dalxiisayaal badan ayaan sameynin safarada gastronomic ee ...
Cunnooyinka karinta ee Extremadura
Halkan waxaa ku yaal dufcad kale oo ka mid ah cuntooyinka karinta fiican ee laga helo gobolka Badajoz, tilmaama oo naftaada ku farxi. Bariis baradho ...
Gastronomy ee Venezuela: Soursop Jam
Macmacaankan soursop looma cabi karo oo kaliya inuu la socdo quraac ama cunno fudud laakiin sidoo kale waxaa loo cabi karaa macmacaan, ama buuxinta keega, ama keega macaan, shaki la’aan waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee Venezuela, miraha guanabano sidoo kale Waa waxaa badanaa loo isticmaalaa keega warshadaha, si loo sameeyo macmacaan, casiirka dabiiciga ah, iwm.
Piperade, saxanka caadiga ah ee Faransiiska
Cuntooyinka caadiga ah ee Talyaaniga, gobol ahaan
Haddii Talyaanigu taariikh ballaadhan ku leeyahay dalxiiska iyo hiddaha taariikhiga ah, sida hodanka ahi u yahay taariikhda gastronomic ee ...
Sauerkraut, saxanka Alsatian ee caadiga ah
Dhinacyada la tixgelinayo marka wax laga cunayo Hindiya
Maanta waxaan ka hadlaynaa arrimo la xiriira cunnada Hindida. Aynu ku bilowno inaan sheegno caadooyinka qaar markaad wax cunayso. Qadada ...
Cabitaannada caadiga ah ee Venezuela
Qaar ka mid ah cabitaannada caadiga ah ee Venezuela waa chicha, in kastoo tani ay asal ahaan ka soo jeedo Peru oo lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo shaciir iyadoo la adeegsanayo halsano halsano ah, sidoo kale waa mid caan ka ah dalka Chile, cabbitaan kale oo lagu sameeyo Venezuela waa malt, Waxaa la soo saaray oo sidoo kale loo dhoofiyey mahadnaq beero waaweyn oo shaciir ah halkaas oo sidoo kale lagu sameeyo biirka.
Cuntada Cuba, dhadhanka iyo dhadhanka
In kasta oo aysan kala duwanaansho iyo sharaf u lahayn sida waddamada kale ee Kareebiyaanka ah, cuntada Cuban waxay noqon kartaa can
La Espetada Madeirense, cuntada dhaqanka ee Madeira
Empanadas hilib macaan oo dhanaan ah, oo laga helo woqooyiga Argentina
Empanadas ma aha oo kaliya dhadhan fiican laakiin waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee cunnada Creole. Waxaa jira noocyo badan ...
Cabitaannada caadiga ah ee lagu raaxeysto Maalinta St. Patrick
Gurigayga waxay ku cabbaan khamriga iyo shaambada ciidaha Kirismaska ​​laakiin Maalinta Saint Patrick waa mid ku habboon ...
Kukiyada yicibta ee Shiinaha
In badan oo naga mid ah, macmacaanka Shiinaha ayaa aad u macaan ama ma heli karno macmacaan aan aad u jecel nahay. Waa wax caadi ah,…
Burgers waa cunno caan ku ah adduunka oo dhan. Iyo sidoo kale Australia sidaa darteed halkan Australiyaanka waxay leeyihiin ...
Keegga shukulaatada Irish, karinta qarnigii XNUMXaad
Mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee loogu talagalay keegga shukulaatada ee Ireland waa kan aan kuu soo gudbin doono marka xigta….
Macmacaanka Ingiriisiga: Pudding
Pudding waa macmacaanka cuntada ('pud' waxaa loo isticmaalaa si aan rasmi ahayn) in Ingiriiska ay jiraan boqolaal ...
Gastronomy-ka Mexico: dhadhaabyada Real del Monte
In kasta oo ay asal ahaan Ingiriis tahay, dhajisku waa saxanka gaarka ah ee Real del Monte, ee gobolka ...
Cunto si aad u sameysid sandwich-ka caadiga ah ee Norwey
Sandwiches had iyo jeer waa hub wanaagsan oo looga baxo dhibaatada gastronomic dhowr sababood awgood, way fududahay in la sameeyo, ...
Batido Loco, oo ah cabitaan caadi ah oo Filibiin ah
Filibiin dhexdeeda waxaan awoodi doonnaa inaan ka helno dhammaan noocyo gaar ah oo aan si dhib yar uga heli karno aagagga kale ee meeraha oo dhan, taasi waa sababta
Gastronomy ee Hokkaido
Dalxiisayaasha waxaa laga soo kala qaadaa dalka oo dhan cunnooyinka kala duwan ee Hokkaido ee kalluunka ...
4 xaleef oo xayawaan geedo ah ossobuco 300 garaam oo boqosha ah 2 karooto 2 basal 1 dher yar ...
Miraha qalaad ee ka yimaada Venezuela
Mid ka mid ah kuwa loogu cunista badan yahay dalka Venezuela waa cambe, oo ku baxa dalka oo dhan, badeecadan iyo natiijada ka soo baxday cilmiga bayoolajiyada ee cuntada ayaa kor u qaaday tayadeeda iyo noocyo qaar ayaa la abuuray, qaar ka mid ah noocyada cambaha ayaa caan ku ah Venezuela, marada, gacmaha, cunnada fudud, iwm, geedka cambe sidoo kale aad baa loo qiimeeyaa, gaar ahaan beeralayda, maadaama ay caleentiisu u oggolaatay hoy xayawaanaadka sidoo kalena loo isticmaalo calafka lo'da ee Venezuela.
Khamriga reer Brazil ee ugu fiican
Ku safridda Brazil waxay ka dhigan tahay daqiiqad gaar ah oo lagu barto waddan ku yaal Koonfurta Ameerika, oo leh xididdo Afro-Mareykan ah iyo gumeystayaal Burtuqiis ah, waana ...
Casho Talyaani ah oo wanaagsan (I)
Dalxiis kasta oo ku nool meel kasta oo adduunka ka mid ah, maanta Internetku wax walba waa u suurta geliyaa maxaa yeelay wax walba wuu sameyn karaa. Tan iyo markii ...
Shanghai maahan oo keliya xarunta dhaqaalaha iyo dhaqanka ee Shiinaha, laakiin sidoo kale waa meesha ugu habboon ee lagu dhadhaminayo cuntada Shiinaha ...
Chorizos la dubay oo ku jira Suugada BBQ
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: • 8 Chorizos Barrilleros • 8 Ulaha Chorizos BBQ Suugada • Ketchup cup • ¼ koob mustard •…
Cunto loo sameeyo Biko, macmacaanka aan ka maqnayn xisbiyada Filibiin
Haddii ay jiraan diyaar garow aan waligood ka maqnayn xafladaha ama isu imaatinnada waaweyn ee qoysaska reer Filibiin, waa Biko, ...
Cunto loogu talagalay Kushari, oo ah mid ka mid ah diyaarinta ugu macaan ee cunnada Masar
Kushari waa mid ka mid ah suxuunta aan waligood ka maqnayn cuntada laga cunteeyo ee makhaayadaha Masaarida, maadaama ay daaweyso ...
Tim Tam, Kukiyadaha Shukulaatada Australia
Waxaanan sii wadaynaa macmacaanka iyo macmacaanka Australia. Waxaan ku leenahay Australia macaan Pavlova Meringue Dessert iyo ...
Macmacaanada ugu caansan Faransiiska IV
Macmacaanka ugu caansan Faransiiska III
Peroni, biirka weyn ee Talyaani
Mid baa arka khariidada Yurub wuuna aqoonsan yahay inta badan waddamada ku jira qaybtan adduunka ...
Recipes ee Boqortooyada Roomaanka
Roomaanku waxay ku raaxaysteen isla cuntooyinka
Kiwi cocktail, oo ah cabitaan aad ugu badan dalka Masar
Khamrigu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa dhaqanka Masriyiin badan, tan iyo waddanka Bariga Afrika ku yaal ...
Gastronomy Venezuela: Mango Jam Recipe
Cuntadani waxay u baahan tahay waqti diyaarin ah oo shan daqiiqo ah, iyo ugu yaraan nus saac in la kariyo, iyo in la diyaariyo cuntada reer Venezuela ee mango macaanka waxaan u baahan nahay 1,5 kiilogaraam oo cambe ah, 650 garaam. sonkorta iyo casiirka laba liin, iyo biyo, inta loo baahan yahay, tan ka dib si fiican ayaan u maydhay midhaha ka dibna waxaan u kala goynay qaybo.
Molokheya oo leh digaag, cunto kale oo Masri ah oo macaan
Molokheya oo ay weheliso nooc ka mid ah hilibka ayaa ah diyaargarowgii 2aad ee rasmiga ah ee Masar ee ka dambeeya horeyba loo yaqaan ...
Gastronomy-ka ugu hal abuurka badan Oregon
Dareenka Cunnada iyo Hal-abuurka ayaa isugu yimid Oregon
Gastronomy of Chiapas waa mid qani ah oo kaladuwan, oo ka kooban suxuun aad u kala duwan. Qaar ka mid ah waa sharraxaad iyo ...
Maxaa lagu ogaanayaa Bonaire
Bonaire ayaa ka sarreysa dhammaanba caan ku ah inuu yahay meel ku habboon oo lagu barto quusitaanka qulqulka qulqulaya hareeraha, ku raaxee noocyo aad u fiican ...
Casa Ronnefeldt, laba qarni oo samaynta shaaha ugu fiican
Qiyaasta caanka ah, shaaha, faleebadaas iftiinka iyo dhadhanka macaan, waxay kuxirantahay adduunka Anglo-Saxon weligeedna ...
Maizena Alfajores, fasalada Argentine
Shaki la'aan, mid ka mid ah cuntooyinka macaan ee ugu badan Argentina waa alfajores. Waxaa jira macaan ...
Cashada Kirismaska ​​ee Holland
Cashada Kirismaska ​​waa cuntada ugu weyn ee dhaqan ahaan loo cuno habeenka Kirismaska ​​ama Kirismaska. Holland gudaheeda waa ...
Guarapo, oo ah is biirsadka qasabka sonkorta ee Cuba
Wax walba laguma xanto Cuba. Waad cabi kartaa cabbitaanno kale oo jasiirad ah, qaarna qaarna qaarna qamri la'aan….
Cashada Kirismaska ​​ee Japan
Kirismaska ​​ayaa caan ku ah in looga dabaaldego Japan, in kastoo dadka badankood aysan aheyn Masiixiyiin. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso ...
Pavlova, oo ah macmacaanka Australiyaanka ee caadiga ah
Mid ka mid ah macmacaanka dhaqameed ee xafladaha Kirismaska ​​ee Australia waa Pavlova dhadhan fiican. Ku qabow sida ay yeeleyso ...
Shiine iyo kafee
Waxaan had iyo jeer ka hadalnaa cuntada Shiinaha, dhadhan fiican leh, aad u fara badan iyo dhir udgoon. Waxaan ka hadleynaa noocyo kala duwan, qaabab iyo avokado gaar ah ...
Saddexda hab ee wax lagu karsado ee cunnada Shiinaha
In kasta oo ay run tahay in karinta shimbiraha caanka ah ee Shiineeska ahi ay xoogaa adag yihiin oo ay u baahan yihiin waxyaabo gaar ah oo aan ahayn ...
Gastronomy ee Quebec
Kanada waa waddan caan ku ah adduunka oo dhan juquraafi ahaan gobolladiisa, dadkiisa, qaab dhismeedkeeda iyo ...
Ma jeceshahay subag Marka waxaan kuu sheegayaa in qarniyadii toddobaatanaad iyo siddeed iyo tobnaad ay Ireland ahayd dhoofiyaha ugu weyn ...
Ossobuco, Hilib laga keenay Talyaaniga
In kasta oo hilibku ka mid yahay cuntooyinka ugu waaweyn dhammaanba adduunka marka laga reebo qaar ...
Caadooyinka iyo caadooyinka Rome
Rome waa isku-dhafid kaamil ah caadooyinka iyo caadooyinka dadka Talyaaniga. Socotada waxay heli karaan dalabyo ah ...
Cunto loogu talagalay sameynta baradhada Nederlandka
Baradhadu badiyaa waxay ka kooban tahay qayb muhiim ah dhammaan caloosha caloosha adduunka, maaddaama ay tani isu-beddelka, nafaqada iyo dhadhanka ...
Liin dhanaan, macmacaan norweji ah oo ka macaan badan
Waraaqaha gastronomy ee Norwey marwalba waxay u taagnaayeen inay yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh, maxaa yeelay mid ka mid ah ...
The Tourtière waa nooc ka mid ah keega ama hilibka hilibka ee ka dhex jira caloosha Canadian, gaar ahaan ...
Cunto u sameyso Salad Filibiintii caadiga ahayd
Dhammaan gobollada adduunku waxay leeyihiin saxan aad u gaar ah, kaas oo inta badan la arko oo laga adeegto shirarka ...
Waddan ku yaal buuro iyo dhul wanaagsan oo daaq iyo lo 'ah, farmaajo waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ...
Gastronomy Hindu: Waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo saxamada
Mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee dalxiis ee lagu tababaro Hindiya waa shaki la'aan dalxiiska cuntada. Waa maxay…
Cunto loogu talagalay sameynta Karkadé, oo ah cabitaan caafimaad oo qabow
Waa la wada ogyahay in Masriyiintii Hore ay ka jirtay aqoon badan dawada dabiiciga ah, sidaa darteed waxay ahayd ...
Cunto u sameys Sambusek, qashinka caadiga ah ee Masar
Sambusek waa magaca mid ka mid ah diyaargarowgii ugu fiicnaa ee gastronomy-ka Masaarida caadiga ah, tan iyo xaaladdan ...
Cananaaska, qalbiyada timirta iyo kani kama salad, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu cuno cunnooyinka noorwiijiga ah
Sidaad sifiican u ogtahay, maxaa yeelay waxaan kaga faallaynay iyaga fursado badan, gastronomy-ka caadiga ah ...
Miami Vice, cabitaanka gaarka ah ee magaalada Miami
Waad ogtahay, sababtoo ah dhowr jeer ayaan kuu sheegnay, in Miami ay tahay mid aad u ...
Baarka adduunka ugu dheer wuxuu ku yaal Düsselforf
Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Düsseldorf, socod tamashle u gal, sahamiso dhammaan geesaha lugteeda oo aad nasasho qaadatid intaad wax cabeyso ...
Cunto loogu diyaariyo Guzeya (macmacaanka qumbaha)
Marar badan, gastronomy-ka caadiga ah ee goobta lagu soo booqdo xilliyada fasaxa ama safarada shaqo waxay noqdaan ...
Cunto u samee Ful Medames, cuntada qaranka Masar
Waa wax caadi ah in dadka booqda Masar ay ku faraxsan yihiin gastronomy-ka caadiga ah ee waddankan soo jiidashada leh, iyo ...
Cunto karinta beerka
Beerka waa hilib aad u xiiso badan oo la kariyo, maxaa yeelay inkasta oo uu xoog badan yahay si gaar ahna ...
Cunto loogu talagalay kaabash dhanaan
Gastronomy-ka Norwey marwalba wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan sababtoo ah dhadhanka xoogan ee calaamadeysan iyo walxaha ...
Cunnooyinka Aabbayaasha Hindiya
Haddii aad rabto inaad ilaaliso shax wanaagsan, waa inaad miciinsataa cuntooyin taxane ah oo bixiya faa'iidooyin badan ...